विचार/ब्लग – Page2– Fewa Times
काठमाडौं । मानिसको नाम परिवर्तन धेरै कारणबाट हुने गर्दछ । जन्मिएको ९ दिन, न्वारनमा राखिने असली नाम भन्दा पछी राखिने नामलाई उपनाम भन्ने गरिन्छ । जब समाजमा कसैले राम्रो काम गर्यो भने अथवा नराम्रो गर्यो भने पनी उपनाम राखेर गाउँ समाजमा पछी त्यही नाम परिचित हुन जान्छ । त्यस्तै उपनामले नेपाली लोक संगीत......
– किरण पौडेल–बरिष्ठ उपाध्यक्ष (युवा संघ नेपाल ) नेपाली युवा आन्दोलनले हामीलाई दिएका कार्यभारहरु सम्पन्न गर्ने क्रममा युवाहरुको हक हित र अधिकारका बिषयहरु उठान गर्ने, संस्थागत गर्ने र संबैधानिक सुनिस्चितता दिलाउनका लागि जे जति उपलब्धिहरु आजका दिनसम्म हासिल भएका छन, ति सबै उपलब्धिहरुको मुख्य श्रेय......
प्रिय कमरेड, अभिवादन ! म नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटी को प्रचार बिभाग सदश्य सुदर्शन बजगाईं तपाईंलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु । सर्वप्रथम काठमाडौबाट जित्दिन भनेर ताप्लेजुङमा गएर त्याहाँको एक जना सम्भावना बोकेका अमुख नेताको भविस्यमाथी खेलवाड गर्दै विजयी हुनु भएकोमा बधाई दिन चाहान्छु । पार्टीभित्र......
- सुर्य चन्द काठमाडौँ – एकतर्फी प्रेम त्यो हो, जसमा एउटाले माया गर्छ तर अर्कोले त्यो प्रेम अस्वीकार गर्छ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो । आजभोलि बुझ्दैछु, एकतर्फी प्रेममा अर्कोले पनि माया त गरेकै हुन्छ तर अर्काको मायाको गहिराइ कति छ बुझेको हुँदैन । प्रेम गर्नेले बुझाउन सक्दैन । सम्भवतः त्यही कारणले......
– सुरेश अधिकारी लामो समय राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि लडाइ लडेको विद्यार्थी बर्गले कहिले राणा शासनका विरुद्धमा कहिले पन्चायती शाशनका विरुद्धमा कहिले विद्यार्थी अधिकार सुनिश्चितताको लागि त कहिले जनजिबिकाको जबालमा हुने अन्याय र अत्याचार को विरुद्धमा सडक आन्दोलन मा आफ्नो जिबनको अमुल्य समय र......
साधनाको चिनारी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मितिः २०७४ जेष्ठ ३१ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई मितिः २०७४ कार्तिक १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त......
गोरखा जिल्ला स्थित गो.न.पा.–३, नारेश्वरमा जन्मनु भई हाल सामाजिक सेवामा तल्लिन रहनुहुने श्री कृष्ण वहादुर थापा २२ वर्षको किशोरावस्थादेखिनै विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न रहँदै साविक कसमश डेभलपमेण्ट बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यको रुपमा रहि काम गर्नुभयो । कसमश डेभलपमेण्ट बैंकको सफलताको अनुभवलाई प्रयोग......
सबैलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ता हुन्छ नै । आज यस्तो भो भोली के हुन्छ? कसैलाई थाहा हुन्न । कतिपय कुरा ग्रह नक्षेत्रका कारण पनि तपाईंको जीवनलाई फरक पारीरहेको हुन्छ । तसर्थ ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जन्मेको......
– विजय अधिकारी मेरो जन्मघर पाँचखाल नगरपालिका वार्ड नंवर २ ज्यामिरकोट , पाँचखाल भ्यु टावर तथा पार्क निर्माण गरि यहाँ बाट मनोरम हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकन गराई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनका निम्ति तथा समग्र पाँचखाल नगरपालिकाको पर्यटकिय गन्तव्यमा रुपान्तरण हुन सक्ने प्रचुर सम्भावनाको उद्गमस्थल......
– नबिन पोखरेल प्रधानमन्त्रिज्यूको निवास (बुढानिलकण्ठ) छेउछाउमा छिमेकी भएर बसोवास गरेको एक दशक पुरा भएर अर्को आधा दशकले नेटो काट्ने बेला भैसकेको छ । देशको हबीगत नियाल्ने मेरा साना आँखाले चियाउँदै गर्दा देशमा थुप्रै जबर्जस्ति भएका छन् । आज मलाई धेरै खुशी लागेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जबर्जस्ती गर्न......